Remekedza Chiremera Changu | Martech Zone
Makore mashoma apfuura, ndakamira kutsvaga vateveri nevateveri. Ini handireve izvo kuti nditi ndanga ndisingade kuenderera nekuwana chinotevera, ndinongoreva kuti ndakarega kutarisa. Ndakarega kugadziriswa nezvematongerwo enyika online. Ndakarega kunzvenga kusawirirana. Ndakarega kuzvidzora kana ndaive nemafungiro akasimba. Ndakatanga kuve wechokwadi kune zvandinotenda uye ndichitarisa pakupa kukosha kunetiweki yangu.
Izvi hazvina kungoitika nevateereri vangu venhau, zvakaitika nebhizinesi rangu futi. Shamwari, vatengi, shamwari dzangu… Ndakafamba ndichibva kuvanhu vazhinji. Ini ndakarasikirwa nehumwe hushamwari, vateveri vazhinji, uye vateveri vazhinji - zvachose. Uye inoenderera mberi. Humwe husiku humwe ndakaudzwa kuti ini ndanga ndisiri wehukama paFacebook uye zvaive kwete kupora. Ndakarega munhu wacho azive kuti vanogona kurega kunditevera chero nguva.
Chokwadi ndechekuti, ini handidi kuita semumwe munhu ini handisi wekuedza kunyengedza vanhu kuti vanditevere. Iniwo handiteveri vamwe vanhu vandinoona vanofadza avo vanotevera. Ivo Vanilla… uye ndinoda Rocky Road.
Vanhu vanovhiringidza rukudzo nechiremera pamwe-kugona uye kutonhorera. Ini handidi kuisa simba kuti ndive-anokwanisa, ndinoda kuva ane shungu uye akatendeseka. Kubasa, ini handidi kuzvikomberedza nevanhu vanoti hongu… ndinoremekedza vanhu zvakanyanya kana varega kutamba-famba vondiudza zvisina musoro zvandinofanira kuita. Kana iwe uchinyatsoda kuti ndikudzingire iwe kunze kwemukova, ita zvehasha kana kusavimbika. Iko hakuna wechipiri mikana.
Pandinofunga nezvevanhu vandinoremekedza online, pane chimwe chinhu chakafanana navo. Heano mashoma chete kubva pamusoro pemusoro wangu:
Seth Godin - hapana chinomisa Seti kuti ataure maonero ake. Ndakamuona achibata nefani yakanyanyisa uye akango dhonza mutsetse mujecha uye haana kumbobvumira kuti ipfuure.
Guy Kawasaki - angangoita makore matanhatu apfuura, ini ndaita dhongi rakangwara kutaura nezve timu yaGuy yevanhu vanomutumira tweeting. Akapfura kumashure nekukurumidza uye zvijekesa kuti ndiani aive kuseri kwekhibhodi.
Gary Vaynerchuk - pachena, unapologetic uye kumeso kwako - Gary anogara achiudza vateereri vake zvavanofanira kunzwa.
Jason Falls - Hapana kumira Jason. Nguva.
Nichole Kelly - mukadzi uyu ndiye misoro… yakajeka, inosetsa segehena, uye - zvakare - haimbodzori.
Chris Abraham - Ndine chokwadi chekuti Chris neni tine maitiro akafanana pese patinoona posvo yezvematongerwo enyika yakanyorwa nemumwe. Haatombodzokera kumashure uye ari pachokwadi uye ane shungu.
Ini handina chokwadi kana paine vamwe vevanhu vakaita seni (ndinoziva zvechokwadi vamwe vacho vanozvidza zvematongerwo enyika). Asi hazvina basa nekuti ini remekedza simba ravo. Ndinoziva kuti kana ini ndichida mhinduro yakatendeseka, ava vashoma vevanhu vasingazombofema hutsi. Ivo havasi kuzozeya mazwi ... ivo vanozozvitaura.
Kwemakore mashoma apfuura, ndakadzidza kuti mutengi anofara haaiti gara wakanamatira. Mutengi ari kuwana mibairo mikuru, zvakadaro, anogara achinamira. Basa rangu harisi rekuva shamwari yemutengi, ndere kuita basa rangu. Izvo dzimwe nguva zvinoda kuti ndivape mari kana sarudzo dzisina kunaka dzichiitwa. Kupa iyo sarudzo yekuda kuremekedzwa uye kuona mhedzisiro KANA kuti bhizinesi revatengi vangu rikuvadzwe uye vadzinge isu moto - ini ndichagara ndichivapa iyo yakaipa nhau.
Zvakandikuvadza pasocial media here? Zvinoenderana nezvaunenge uchireva kuvadza. Kana kuyerwa kwako kwekubudirira kuri fan uye vateveri maakaundi - saka hongu. Ini handiyedze kubudirira nenzira iyi, zvakadaro. Ini ndinozviyera nenhamba yemakambani atakabatsira, iyo nhamba yemazano atinogashira kuburikidza neshoko remuromo, huwandu hwevanhu vanokwira kuzonditenda mushure mekutaura, nhamba yemakadhi ekutenda akarembera pamadziro edu basa (isu tine yega yega!) uye huwandu hwevanhu vakanamatira neni pamusoro pemakore.
Kuremekedza uye chiremera hazvidi chibvumirano kana se-kugona. Ndine vatengi vakakura, vashandi vakakura, vaverengi vakuru, uye dzimwe shamwari, vateveri nevateveri vandinoda kwehupenyu hwese.
Ive wechokwadi kune vateereri vako. Ndiyo chete nzira yekuti uve wechokwadi kwauri.
PS: Kana iwe uchinetseka kuti ndiani wandisingaremekedze pamhepo… rondedzero yacho yakati rebei. Parizvino, pamusoro pechinyorwa changu iri Matt Kucheka. Icho hachisi chinhu chega ... Ini handigoni kumira mune zvematongerwo enyika, zvakanyatsoyerwa, zvakapetwa mhinduro kumibvunzo yakawandisa. Ini ndakabvunza Matt mibvunzo yakati wandei yakanangana pamusoro pemakore asi, zviripachena, mamakisi angu eKlout haana kukwana zvakakwana kuti ambopindura Ini ndinogara ndichimuona achitaura neaniko ndiani. Zvichida chinhu chandakataura… ini handizive uye handina basa nazvo.
Wedzera pane urwu runyorwa chero munhu anoramba achitora mapikicha avo ega kuti agovane zuva rese kana kutaura nezve ivo pachavo mune wechitatu munhu. Kana ivo vachigovana yavo yega quote, ini ndinonyatsoda kuvabaya pahuro. Ingo taura.
Tags: chris abrahamgary vaynerchukGuy Kawasakijasoni anowanichole kellyseth godin
Zvakanaka ndinofanira kutaura kuti yako posvo yakandikurudzira chaizvo - zvirinani zvakakwana kuti uwane mhinduro. Chokwadi - iva akatendeka kwauri. Ndiyo chete nzira yekunyatsonakidzwa nebasa rako. Chinhu chimwe chete chakandivhiringidza uye chaive chaicho kumagumo. Iwe haufarire vanhu vanogovana yavo pachavo makotesheni. Kuda kuziva. Ini kazhinji ndinomuka mumaawa ekutanga ndine pfungwa yakadzika kana maviri, mamwe acho anondisundira chaizvo. Iye zvino ndinoziva kuti vamwe vangangodaro vasina kubatika, asi ini ndoda kunzwa zviri mumoyo yavo, pane kuverenga zvinhu zvakadzoserwa kubva kune vamwe (kazhinji kubva kune vanonzi vanozivikanwa). Pfungwa dzangu chete.
Mhoro @ kubudirira: disqus. Ini handipikisane nevakuru vanhu vane 'makotesheni ... ndipo pavangonyora iyo quote, nequotes, uye zita ravo pairi kuti vamwe vagovane. Inoita kunge narcissistic - kungori kufunga kwangu. Unogona kundidudza pane izvozvo 😉
“Ini handidi kuisa simba kuti ndive-anokwanisa, ndinoda kuva ane shungu uye akatendeseka. ”
Ini ndinoda izvi, neniwo. Ini ndinoramba ndichiverenga zvinyorwa zvinoratidza mhando yevateereri pamusoro pehuwandu. Zvinotaridza senge vanhu vazhinji vanobudirira vanowana kuti kune vanhu kwavari uye kunamatira navo pane kuyedza kufadza munhu wese. Great post.